Apple Pay inomira kushanda muRussia nekuda kwekunetsana neUkraine | Nhau dze iPhone
Apple Pay inomira kushanda muRussia nekuda kwekunetsana neUkraine
Pasinei nekutyisidzirwa neEuropean Union neUnited States, Russia haina kuita hanya nazvo uye yakasarudza kupinda muUkraine. Mushure mekurwisa, hurumende dzeAmerica neEurope dzakaita yakatemera nyika zvirango zvehupfumi iyo inosanganisira kurambidzwa kwekutengesa kwemabhangi eRussia kunze kwenyika.
Mhedzisiro yezvirambidzo izvi zvinoreva kuti Apple Pay neGoogle Pay, dzakamira kushanda munyika. Sezvakashumwa neCentral Bank yeRussia, mabhanga makuru mashanu eRussia akaona mabasa avo epasi rese achirambidzwa nekuda kwezvirango kubva kune dzimwe nyika, kudzivirira vatengi vavo kushandisa makadhi avo kunze kwenyika.
Havagoniwo kuita kuendesa mari kumakambani ari muEuropean Union uye muUnited States.
Mabhangi akabatwa neizvi: VTB Boka, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank uye Otkritie. Central Bank yeRussia inoti makadhi akapihwa nemabhanga mashanu aya haashande neApple Pay kana Google Pay, sezvo ese ari maviri mapuratifomu. vanogara muUnited States.
Vashandisi veRussia vanogona kuramba vachishandisa makadhi akapihwa nemabhangi aya muRussia pasina dambudziko, asi kwete kuburikidza nedhijitari wallet yekambani yeCupertino-based kana Google.
Mazuva mashoma apfuura, Mutevedzeri weMutungamiriri weUkraine akatumira tsamba yeruzhinji kuburikidza neTwitter kuApple kuitira kuti kambani ichatora zvose App Store uye Mac App Store, chisarudzo icho panguva ino chisati chataurwa.
Sarudzo iyi yaizokuvadza vashandisi (vasingazokwanise kuisa chero application sezvatinoziva tese). Asi, sekureva kwemutevedzeri wemutungamiri weUkraine, zvaizoita vashandisi vachamukira hurumende vachida kuti arege kupinda muUkraine, chimwe chinhu chisingambofungidzike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Pay inomira kushanda muRussia nekuda kwekunetsana neUkraine
Uku ndiko dhizaini yakaburitswa yepanera repamberi reiyo iPhone 14
Apple inofarira kubhadhara faindi muNetherlands pane kuwedzera dzimwe nzira dzekubhadhara